၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင်ထွက်ပေါ်လာမည့်အကောင်းဆုံး Netflix ရုပ်ရှင် ၂၅ ခု - ပြည့်စုံသောနေ့စွဲနှင့်အခြားအရာများ - စာမျက်နှာ 12 - Netflix ရုပ်ရှင်
၂၀၁၀ Aprilပြီလတွင်လာမည့်အကောင်းဆုံး Netflix ရုပ်ရှင်အသစ် ၂၅ ကား
25 Best New Netflix Movies Coming April 2019
ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် - Netflix မီဒီယာစင်တာမှရရှိသောပြီးပြည့်စုံသောနေ့စွဲ / Netflix
5 ကောင်းသော Netflix ရုပ်ရှင်အကြံပြုချက်များဒီတနင်္ဂနွေ: အ Highwaymen နှင့်ပိုပြီး Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရာသီ 15, ဇာတ်လမ်းတွဲ 19 ပြန်လည်စုစည်း: အားလုံးဒီနှစ်အသံတိတ် Netflix ရုပ်ရှင် က ရိဒ် Gaudens လွန်ခဲ့သော2နှစ်က @reedgaudens ကိုလိုက်နာပါ
နောက်တစ်ခု 26 ၏ 12 Prev browse လုပ်ရန်သင်၏←→ (မြား) ကိုသုံးပါ
ဆန်ဒရာဘူးလော့ခ်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်၊ Los Angeles မြို့၊ မန်းကျေးရွာပြဇာတ်ရုံ၌ဘုရားသခင့်လျှို့ဝှက်ချက်များဆိုင်ရာမြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုပြသခြင်း၏ Premiere သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း - Kevin Winter / ImageDirect
ဆယ့်ငါး Ya-Ya Sisterhood ၏မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ
- ဒါရိုက်တာ Callie Khouri
သရုပ်ဆောင် - Sandra Bullock၊ Angus Macfayden, Ellen Burstyn, Ashley Judd ဂျိမ်းစ်ဂန်းနာ၊ မဂ္ဂီစမစ်၊ Fionnula Flanagan, Shirley Knight, မMatthewဲ Settle, Cherry Jones၊ David Rasche, Gina McKee
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - တနင်္လာနေ့၊ 1ပြီ ၁ ရက်
ကမ္ဘာကြီးသည်သဘောတူနိုင်သောအရာအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာစန်ဒရာ Bullock ဖြစ်သည်။ မင်းကရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်ကိုမကြိုက်တဲ့သူနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုမကြိုက်တဲ့သူကိုရှာဖို့ဖိအားပေးခံရလိမ့်မယ် သင်အိပ်နေစဉ် နှင့် Netflix ရဲ့တပ်များအာရုံအဖြစ်မကြာသေးမီတာမျိုး ငှက်သေတ္တာ ။ ဒီနွေ ဦး ရာသီ, Bullock ရဲ့ယခု - အပြောင်လူသိများအစောပိုင်း aughts ဇာတ်ကားများ၏တ ဦး တည်းနှင့်အတူပြန်လည်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်လာဖို့အဆင်သင့်ရ Ya-Ya Sisterhood ၏မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ မင်းရဲ့စောင့်ကြည့်စာရင်းကိုဝင်လိုက်ပြီ
နာမည်တူစာအုပ်နှင့်၎င်း၏ prequel ပုံပြင်များစုဆောင်းခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး နေရာတိုင်းမှာ Little ကယဇ်ပလ္လင် ရေဗက္ကာဝဲလ်က Ya-Ya Sisterhood ၏မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ ကျော်ကြားသောနယူးယောက်ပြဇာတ်ရေးဆရာ Siddalee Walker (စန်ဒရာ Bullock) နောက်သို့လိုက်သည် သူမ၏နောက်ဆုံးပေါ်ပြဇာတ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်သောအခါသူမမကျေနပ်သည့်ကလေးဘဝကိုမဂ္ဂဇင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူမ၏မိခင်ဗီဗီယန် (Ellen Burstyn) ကိုစိတ်ပျက်စေသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ Ya-Ya Sisterhood ဟုခေါ်သော Vivian ၏သူငယ်ချင်းများသည် Siddalee ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီး Louisiana သို့ပို့ဆောင်သည်။
Ya-Ya Sisterhood ၏မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူစာရေးဆရာဒါရိုက်တာ Callie Khouri မှဖြစ်သည် Thelma & Louise နှင့် စကားပြောရန်တစ်ခုခု Mad Money ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Connie Britton ဦး ဆောင်သောဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲကိုဖန်တီးခဲ့သည် Nashville ။ ရုပ်ရှင်ကားသည်ဝေဖန်သူများ၏လက်ခံမှုကိုအရောအနှောရရှိခဲ့ပြီး ၄၃% သော Rotten Tomatoes ၏ဝင်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၇၃.၈ သန်းဖြင့် Box Office ၏ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လ၏ထိပ်ပိုင်း Netflix တွင်စတင်လွှင့်သောအခါဤမေ့နေသည့် Sandra Bullock ဂန္ထဝင်လက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်။
အာကာသ Netflix စီးရီးအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ
တစ်စုံတစ်ယောက်ဂရိတ်၊ စုံလင်သောနေ့ရက်၊ Unicorn စတိုးဆိုင်နှင့်ခရီးသွားဘောင်းဘီများအပါအ ၀ င် ၂၀၁၈ ခုနှစ်toပြီလတွင် Netflix တွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံး Netflix ရုပ်ရှင်အသစ် ၂၅ ကား။
မတ်လနှင့် # ၈၂၁၇ အထိအထင်ကြီးလောက်သောအကြိုက်ဆုံးဟောင်းနွမ်းသောအသစ်နှင့်မူရင်းရုပ်ရှင် Premieres များနောက်တွင် Netflix ရုပ်ရှင်အသစ်များအတွက်နောက်လတစ်လသည် 8217 ဖြစ်သည်။ Aprilပြီလကအဆင့်မြင့်သောမူလဈေးနှုန်းထက်ပိုမိုပေါ့ပါးဟန်ရှိသော်လည်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူအားလုံးကိုနှစ်သက်စရာများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ & # 8217ll သည်လွမ်းဆွတ်သော hits များမှအကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်အသစ်များသို့ဘယ်သောအခါမျှမရောက်နိုင်ပါ။ ဤအသစ်လတ်ဆတ်သောဖြည့်စွက်ချက် ၂၅ ခုသည်လနှင့် # 8217 အကောင်းဆုံးများဖြစ်သည်။
ထုံးစံအတိုင်းသောကြာနေ့တိုင်းတွင် Netflix ၏မူရင်းရုပ်ရှင်ပြသခြင်းကိုfeaturesပြီ ၅ ရက်တွင် Brie Larson & # 8217s မှအလွန်မျှော်လင့်ထားသည့်ဒါရိုက်တာဒါရိုက်တာနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ ကြံ့ခိုင်စတိုး ။ Captain Marvel & # 8217 ၏နောက်ဆုံးအကျိုးတူလုပ်ငန်းဖြစ်သော Gina Rodriguez နှင့် Brittany Snow ကြယ်ပွင့်ဟာသတွင်ပါဝင် တစ်ယောက်ယောက်, နှင့် ယောက်ျားလေးများအားလုံးအတွက်ငါ & # 8217ve မတိုင်မီကချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည် နာမည်ကျော် Noah Centineo မှဆယ်ကျော်သက် rom-com ပြီးပြည့်စုံသောနေ့စွဲ ။
ယခုလထုတ်လွှင့်သည့်gရာမနေရာအနှံ့ရှိရုပ်ရှင်နှစ်ခုစလုံး၏ပွဲ ဦး ထွက်ကိုရှာဖွေပါ ခရီးသွားဘောင်းဘီများ၏ညီအစ်မ အဖြစ်ကောင်းစွာစီးရီး Ya-Ya ညီအစ်မများ၏မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ ။ ကမ္ဘာ့ထာဝရအကြိုက်ဆုံးဖျော်ဖြေသူ Beyonc & eacute သည်ယခုလ Netflix တွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောသူလည်းဖြစ်သည် Obsessed လိုပဲ ပဉ္စမအချက် - အရုပ်ဆိုးအမှန်တရား၊ နှင့် အရိုးစုဆောင်း။ သို့သော်ထိုရုပ်ရှင်ကြီးများသည်သင့်အကြိုက်ဆုံးစာရင်းများသို့သွားသောရုပ်ရှင်အကြိုက်ဆုံးများများရှိသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ flပြီလတွင် Netflix သို့လာရောက်မည့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၂၅ ခုစာရင်းနှင့်အတူနောက်လာမည့်နှစ်တွင်မာရသွန်အတွက်လာမည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုရှာဖွေပါ။
နောက်တစ်ခု:25. နိုင်ငံတော်သမ္မတအားလုံးနှင့် # 039s အမျိုးသားများ
၂၅ ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအားလုံးနှင့် # 8217 အမျိုးသားများ
ဒါရိုက်တာ - Alan J. Pakula
သရုပ်ဆောင် - Dustin Hoffman၊ Robert Redford၊ Jack Warden၊ Martin Balsam၊ Hal Holbrook၊ Jason Robards, Jane Alexander, Stephen Collins, Ned Beatty, Meredith Baker, Penny Fuller, Penny Peyser, Lindsay Crouse, Robert Walden, F. Murray Abraham, David Arkin
Netflix ရှိရုပ်ရှင်အများစုသည်အသစ်ဖြစ်သော်လည်းလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်မှစတင်ကာရက်စွဲများရှိသော်လည်းပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်စစ်မှန်သောဂန္ထဝင်ကိုမကြာခဏတွေ့ရသည်။ ယခုလတွင်လွှင့်ထုတ်လွှင့်သည့်ကုမ္ပဏီကြီးသည်သူတို့၏စောင့်ကြည့်စာရင်းမှနောက်ထပ်အရာတစ်ခုလိုချင်သည့်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုအားလုံးအတွက်ထိုကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်တစ်ခုကိုထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတအားလုံးနှင့် # 8217 အမျိုးသားများ Aprilပြီလမှာမင်းရဲ့စောင့်ကြည့်စာရင်းထဲရောက်လာပြီးငါတို့ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးသူ့ရောက်ရှိလာပုံကိုနှာခေါင်းထဲရောက်နေပြီ။
Carl Bernstein နှင့် Bob Woodward & # 8217s ၁၉၇၄ ခုနှစ်နာမည်တူအမည်ရှိစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုအခြေခံပြီး၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတအားလုံးနှင့် # 8217 အမျိုးသားများ ရစ်ချက်နစ်ဆင်၏သမ္မတသက်တမ်းအတွင်းနှစ် ဦး ၏မျက်လုံးမှ Watergate အရှုပ်တော်ပုံအပေါ်အာရုံစိုက်သည် ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းထောက်များဖြစ်သော Carl Bernstein (Dustin Hoffman) နှင့် Bob Woodward (Robert Redford) ပြိုင်ဘက်များကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဌာနချုပ်၏ဖောက်ထွင်းမှုမအောင်မြင်ခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်နက်နဲသည့်သတင်းပေး Deep Throat (Hal Bolbrook) ၏အကူအညီဖြင့်၎င်းတို့သည်ငွေကိုထိပ်ဆုံးသို့ ဦး တည်သွားစေသည့်ကိစ္စတွင်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ကြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတအားလုံးနှင့် # 8217 အမျိုးသားများ Rotten ခရမ်းချဉ်သီးတွင်အဆင့် ၉၃% လတ်ဆတ်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိခဲ့ပြီးလွှတ်ပေးသည့်အခါဝေဖန်သူများထံမှအများအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်လက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည် Box Office ၏ဝင်ငွေဒေါ်လာသန်း ၇၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒေါ်လာ ၇၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်။ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံအပါအ ၀ င်ဆုရှစ်ဆုရရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရုပ်ရှင်သည်အနိုင်ရရှိမှုလေးခုနှင့်အတူထွက်သွားခဲ့သည်။ သင် & # 8217re သည်ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်သို့သင်ဝင်လျှင်သင်donပြီလထိပ်တွင် Netflix ကိုထိသောအခါဤ & # 821770s အကြိုက်ဆုံးကိုလက်လွတ်ချင်သည်မဟုတ်။
၂၄ ။ နီလာ
Wayne Blair မှရိုက်ကူးသည်
ဒါရိုက်တာ Chris O & # 8217Dowd၊ ဒေဗောရမာမေးလ်၊ ဂျက်စီကာ Mauboy၊ ရှရီ Sebbens၊ Miranda Tapsell၊ Don Battee၊ Tory Kittles၊ Eka Darville၊ Kylie Belling, Judith Lucy, Georgina Haig, Rhys Muldoon, Barry Southgate, Meyne Wyatt၊
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - သောကြာနေ့၊ Aprilပြီ ၂၆
တခါတရံမှာ Netflix ကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်သင်မြင်ရတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာမင်းကြားဖူးတဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းမတွေ့ကြုံဖူးဘူးလို့အမြဲတမ်းမြင်နေခဲ့ဖူးတယ်။ သို့သော်၎င်းသည် # 8217s သည် streaming ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏အချိန်ကိုသင်၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်မကိုက်ညီသောဖျော်ဖြေရေးနှင့်သင့်အချိန်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ဒီAprilပြီလ, သြစတြေးလျဂီတ dramedy နီလာ ၏ပရိသတ်များစောင့်ကြည့်စာရင်းပေါ်သို့၎င်း၏လမ်းသီဆို အိပ်မက်ဆိုးလေးများ၊ နှင့်အားလုံးဂီတ။
၂၀၀၄ ခုနှစ်ကဇာတ်ကားကိုအခြေခံပြီးဇာတ်ကားကိုအခြေခံပြီးပြဇာတ်ကိုအခြေခံပြီး၊ နီလာ စစ်တပ်ကိုဖျော်ဖြေရန်ဌာနေသြစတြေးလျအမျိုးသမီးလေး ဦး သည်ဗီယက်နမ်သို့သွားစဉ် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Gail (Deborah Mailman)၊ ဂျူလီ (Jessica Mauboy)၊ Kay (Shari Sebbens) နှင့်စင်သီယာ (Miranda Tapsell) တို့သည် Sapphires ဟုခေါ်သောဂီတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတီထွင်ရှာဖွေသူ Dave Lovelace (Chris O & # 8217Dowd) မှရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုအဖွဲ့သည်ဘဝ၊ ဂီတနှင့်စစ်ပွဲအကြောင်းများစွာလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။
လွှတ်ပေးပြီးနောက် နီလာ Rotten Tomatoes နှင့် ပတ်သက်၍ ၉၁% လတ်ဆတ်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည်သြစတြေးလျအတွက်စီးပွားဖြစ်ထိခိုက်မှုအဖြစ်လူသိများပြီးစုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၈.၀ သန်းမှစုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၂၀.၄ သန်းရရှိသည်။ Sapphires ကိုသြစတေးလျ & # 8217s အော်စကာဆုရှင် ၁၂ ဦး အား AACTA Awards မှအမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုမှော်တစ်ခုခုရှိ & # 8217s ။ လရဲ့အဆုံးမှာ Netflix ပေါ်စတင်လွှင့်တဲ့အချိန်ကိုကြည့်ပါ။
၂ ။ ကယ်နုတ်ခြင်း
လွှတ်ပေးသည့်နှစ် - 1972
ဒါရိုက်တာ John Boorman
သရုပ်ဆောင် - Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronny Cox, Ed Ramey, Billy Redden, Bill McKinney, Herbert & # 8220 Cowow, James Dickey, Macon McCalman, Belinda Beatty, Charley Boorman, Seamon Glass
Netflix သို့လာရောက်သည့်ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ကားများအကြောင်း၊ streaming iantရာမ isn & # 8217t သည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းများကိုဂန္တ ၀ င်ရုပ်ရှင်တစ်ခုသာပေးသည်။ ဒီAprilပြီလမှာမင်းရဲ့စောင့်ကြည့်စာရင်းကို ၁၉၉၀ မတိုင်ခင်ကရုပ်ရှင် ၂ ခုနဲ့အတူတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင် & # 8217 ဆိုဒ်ကိုခြေရာခံ။ စောင့်ကြည့်နေသူ & # 8217 ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ရွေးချယ်သူဖြစ်လျှင်၎င်းသည်သင့်အတွက်အထူးကြီးမားသောလဖြစ်သည်။ ပေးပြီးနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတအားလုံးနှင့် # 8217 အမျိုးသားများ ပထမလရဲ့နာရီတစ်လုံး၊ ကယ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ်သင် & # 8217 အားလုံးသည်အမှောင်ထုနှင့်စတင်ချင်သည် ကယ်နုတ်ခြင်း ။
James Dickey နှင့် ၁၉၇၀ ၁၉၇၀ တူညီသောဝတ္ထုကို အခြေခံ၍ ကယ်နုတ်ခြင်း Atlanta (Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty, Ronny Cox) မှသူငယ်ချင်းလေး ဦး နှင့်ဂျော်ဂျီယာကျေးလက်ဒေသတွင်တစ်ပတ်ကြာနေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောသူငယ်ချင်း ၄ ယောက်ကိုအာရုံစိုက်သည်။ သို့သော်သူတို့ရောက်လာသောအခါသူတို့၏အားလပ်ရက်သည်မလာရောက်သောဒေသခံများကအနှောင့်အယှက်ပေးခံရပြီးတိုက်ခိုက်ခံရချိန် မှလွဲ၍ ဘာမှမဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းများကသူတို့၏ခရီးကိုတိုတောင်းရန်နှင့်အိမ်သို့ပြန်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းမကြာမီသူတို့သည်အသက်ရှင်သန်ရန်ရန်ပွဲတွင်ပိတ်မိနေကြသည်။
ကယ်နုတ်ခြင်း Rotten Tomatoes (၉၃%) မှလတ်ဆတ်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပြသခဲ့ပြီး box office မှာထိခိုက်ခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည်ပြည်တွင်းစုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၄၆ သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်ပဉ္စမမြောက်အမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့သည်။ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံ၊ အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာနှင့်အကောင်းဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်းအပါအ ၀ င်ဆုသုံးဆုအတွက်လျာထားခံရသည်။ ယင်း၏မြင်ကွင်းများကိုကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲသော်လည်းclassicပြီလထိပ်တွင်ဤဂန္ထဝင်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
WESTWOOD, CA & # 8211 November 05: မင်းသား Brad Pitt သည် California ရှိ Westwood တွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်က FOX Westwood Village ပြဇာတ်ရုံ၌ကျင်းပခဲ့သည့် & # 8220Babel & # 8221 ၏ Paramount Vantage Premiere သို့ရောက်ရှိသည်။ (Frazer Harrison / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၂၂ ။ သုတ်
ဖြန့်ချိသည့်နှစ် - 2000
အားဖြင့်ဒါရိုက်တာ: Guy Ritchie
သရုပ်ဆောင် - Jason Statham၊ Stephen Graham, Brad Pitt, Alan Ford, Robbie Gee, Lennie James, Ade, Dennis Farina, Rade & Scaronerbed & # 382ija, Vinnie Jones, Adam Fogarty, Mike Reid, Benicio del Toro, Sorcha Cusack, Jason Flemyng, Goldie , Velibor Topi & # 263, Sam Douglas, Ewen Bremmer, Andy Beckwithc, Dave Legeno, William Beck
Netflix တွင်ပြီလကို Thbackbacks လအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။ အသစ်ထုတ်လွှတ်မှုအသစ်များသည်အတိတ်ကာလမှနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်သည်။ သင်၏စောင့်ကြည့်စာရင်းတွင်သင်ကျိန်းသေအလိုရှိသည်မှာနောက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးမဟုတ်သေးသည့် ၂၀၀၀ သည်အစွန်းရောက်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည် သုတ် ။ ရာဇ ၀ တ်မှုဟာသသည်နောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးယနေ့ထိထုတ်လွှင့်နေဆဲဖြစ်သောရုပ်ရှင်များစွာအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ ဒါဟာယခုလ Netflix သို့လာမယ့်အကောင်းဆုံးအသစ်ဖြန့်ချိရုပ်ရှင်ခေါင်းစဉ်များထဲမှသံသယမရှိဘဲ & # 8217s ။
စာရေးဆရာဒါရိုက်တာ Guy Ritchie မှ သုတ် အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောကြံစည်မှုနှစ်ခုအောက်တွင်တစ်ခုမှာလက်ဝှေ့ထိုးသူဖြစ်သူတူရကီ (Jason Statham) နှင့်သူသည်လက်ဝှေ့သမား Mickey (Brad Pitt) ကိုလောင်းကစားရန်သူလူဆိုးဂိုဏ်းဝင်အုတ်ခ်ျ (Alan Ford) နှင့်စကားပြောစဉ်တွင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Mickey ကသူ၏တိုက်ပွဲကိုပစ်လိုက်သောအခါ Brick Top နှင့်ပြtroubleနာဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင်လူဆိုးဂိုဏ်းဖြစ်သော Frankie Four Fingers (Benicio del Toro) သည် Brick Top & # 8217s စာအုပ်များနှင့်လောင်းကစားလုပ်သော်လည်းခိုးယူထားသောစိန်တစ်လုံးသည်လန်ဒန်သို့သွားသောခရီးကိုမကြာခင်လွှမ်းမိုးသွားသည်။
သုတ် ဒါဟာပုပ်ခရမ်းချဉ်သီး၏ 73% အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရှိထားသူနှင့်ကျော် $ 83 သန်း၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် box Office ရဲဝင်ငွေအဖြစ်ကောင်းစွာ, ဝေဖန်နှင့်စီးပွားဖြစ်နှစ် ဦး စလုံးလက်ခံခဲ့သည်ခဲ့သည်။ 2017 ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်ယခုအချိန်အထိစုစုပေါင်းဇာတ်လမ်းတွဲ 20 ရာသီနှစ်ခုထုတ်လွှင့်သော Crackle အပေါ်တူညီသောအမည်ဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးသို့အဆင်ပြေအောင်ခဲ့သည်။ သော်လည်း သုတ် အင်တာနက်နှင့်ကေဘယ်လ်တစ်လျှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသုံး ၀ င်သောဟောင်းနွမ်းသောအရာများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Netflix ကိုAprilပြီလထိရောက်သောအခါစောင့်ကြည့်ရန်သင့်အခွင့်အရေးကိုသေချာစွာသိမ်းထားပါ။
MADRID, စပိန် & # ၈၂၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၇ - ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်၊ စပိန်နိုင်ငံ၊ မက်ဒရစ်မြို့ရှိ Ritz ဟိုတယ်၌သရုပ်ဆောင် Tom Cruise တက်ရောက်ခဲ့ပြီး & # 8220Valkyrie & # 8221 Photocall ။ (Carlos Alvarez / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
By: Bryan Singer ကရိုက်ကူးသည်
သရုပ်ဆောင် - Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Terence Stamp, Tom Wilkinson, Carice van Houten, Kevin McNally, David Schofield, Christian Berkel, Jamie Parker, Eddie Izzard, David Bamber, Thomas Kretschmann, Harvey Friedman, Kenneth Cranham, Matthias Freihof Waldemar Krobus၊ Halina Reijn၊ Werner Daehn၊ Tom Hollander၊ Bernard Hill၊ Ian McNeice
ကြည့်ပါ၊ အံ့သြစရာတစ်ခုပါ Valkyrie Aprilပြီလ & # 8217s အတွက်အကောင်းဆုံးအသစ်ဖြန့်ချိများအတွက်ဒါရိုက်တာသူ & # 8230 စဉ်းစားထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ (အကယ်၍ သင်အခြေအနေကိုသိလျှင် ၈၂၁၇ သို့ရောက်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအရာကိုဤနေရာတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော်နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်ဂူဂဲလ်ကိုလွတ်လပ်စွာထိတွေ့ပါ။ ) ၎င်းအားဖယ်ထုတ်ခြင်းမှာခိုင်လုံမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြည့်ရှုသူအပေါ်တွင်မူတည်ပါသေးသည်။ ဆက်လက်စားသုံးရန်။ ဒါကြောင့်ဒီမှာက Tom Cruise ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သက်ရှိတွေအတွက်စောင့်ကြည့်စာရင်းကိုထည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။
Valkyrie ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနာဇီဂျာမနီနှင့် Valkyrie စစ်ဆင်ရေးတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊ အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာအားလုပ်ကြံပြီးနောက်ဂျာမန်အရာရှိများသည်သူတို့၏တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူရန်စီစဉ်ထားသည်။ Tom Cruise သည်ဂျာမနီတွင်အမှုထမ်းသော်လည်းဟစ်တလာ၏အုပ်စိုးမှုကိုကြောက်ရွံ့သူဗိုလ်မှူးကြီးကလော့စ်ဗွန်စတိတ်ဖ်ဘတ်အားသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည်နာဇီအစိုးရကိုဖြုတ်ချလိုသည့်စိတ်သဘောထားတူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပူးပေါင်းသောအခါဗွန်စတိတ်ဖ်ဘာ့ဂ်သည်မစ်ရှင်အဖွဲ့၏အဓိကအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။
အဲဒါကိုဖြန့်ချိသည့်အခါ 2008 ခုနှစ်, Valkyrie ပုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးများ၌ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကထင်ဟပ်သည်ကိုဝေဖန်သူများထံမှလက်ခံသောအရောအနှောလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Tom Cruise & # 8217s တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း Scientology တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းကဲ့သို့ပင်ရောထွေးစွာကြိုဆိုခြင်းခံခဲ့ရသည်။ Valkyrie ရုံဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကျော်ယူဆောင်လာ, box Office ရဲမှာကောင်းစွာဖျော်ဖြေပေမယ့်မဆိုအဓိကဆုအမည်စာရင်းတင်သွင်းရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် Netflix တွင်Aprilပြီလထိပ်တွင်စတင်ထုတ်လွှင့်သည်။
BEVERLY HILLS, CA & # 8211 ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ - မင်းသား Benedict Cumberbatch နှင့် Keira Knightley တို့သည်နယူးယောက်တိုင်းမ်စ်နှင့် # 8217 TimesTalk & amp TIFF သို့တက်ရောက်ကြပြီး Los Angeles ရှိ TIFF သည် ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် Beverly တွင်တင်ပြသည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ကုန်း။ (Alberto E. Rodriguez / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၂၀၁၄
ညွှန်ကြားသည် - Morten Tyldum
သရုပ်ဆောင် - Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Rory Kinnear, Allen Leech, မMatthewဲ Beard, Charles Dance, Mark Strong, James Northcote, Steven Waddington, Tom Goodman-Hill, Alex Lawther
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - တနင်္လာနေ့၊ 29ပြီ ၂၉
လူတိုင်းသည်စစ်မှန်သောရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုနှစ်သက်ပြီး Netflix တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောမည်သည့်မှတ်တမ်းအမျိုးအစားကိုမဆိုနှစ်သက်ကြသည်။ အတုဂိမ်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်စစ်မှန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အော်စကာဆုရရုပ်ရှင်ကားတစ် ဦး ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အရေးကြီးသောစစ်မှန်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။ Alan Turning နှင့်ပတ်သက်သောအရေးကြီးသောဇာတ်လမ်း၏ထိပ်တွင်၊ Benedict Cumberbatch နှင့် Keira Knightley တို့သရုပ်ဆောင်ထားကြပြီး၎င်းတို့သည်မင်းကိုဘယ်တော့မျှစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သူမဆိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်လိုအပ်နေသနည်း။
အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုအခြေခံသည် အလန် Turning: တစ်ခု Enigma Andrew Hodges က အတုဂိမ်း ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် cryptanalyst Alan Turning (Benedict Cumberbatch) ၏ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြောပြသည်။ ဗြိတိသျှထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီသည်နာဇီကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်ကျော်ဖြတ်ရန် Turning ကိုခေါ်ယူသောအခါသူသည် Enigma ကိုအက်ကွဲခဲ့သည်။ Joan Clarke (Keira Knightley) ပါဝင်သောသူ၏အဖွဲ့သည် Enigma မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖတ်ပြပြီးသူများကို၎င်းကို decipher လုပ်ရန်ဖန်တီးသည်။ Turning & # 8217s များ၏လိင်နှင့်ပတ်သက်သောအများပြည်သူ၏အမြင်သည်သူ၏ဂုဏ်သတင်းနှင့်လုံခြုံမှုကိုခြိမ်းခြောက်သော်လည်း Turning နှင့်သူ၏အဖွဲ့သည်သူတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးဆုံးပြီးသူရဲကောင်းများဖြစ်လာသည်။
အတုဂိမ်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခံရသောရုပ်ရှင်ကားများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်ပြီးပုပ်ထားသောခရမ်းချဉ်သီးများ၌အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အသစ် ၉၁% ရရှိထားသည့်ရုပ်ရှင်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုရုပ်ရှင်သည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ ၁၄ သန်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဒေါ်လာ ၂၃၃ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ၈၇ ကြိမ်မြောက်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွင်ရုပ်ရှင်သည်အကောင်းဆုံးပုံနှင့် Cumberbatch နှင့် Knightley တို့အတွက်သရုပ်ဆောင်ဆန်ဒများအပါအ ၀ င်ဆုရှစ်ခုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် Best Adapted Screenplay ကိုရရှိခဲ့သည်။ Don & # 8217 သည်flပြီလကုန်တွင် Netflix ရှိအော်စကာဆုရှင်ကိုလက်လွတ်သည်။
PARIS & # 8211 ဒီဇင်ဘာ ၁၇ - ထုတ်လုပ်သူ Akiva Goldsman (L)၊ သရုပ်ဆောင်ဝီစမစ်သ် (C) နှင့်ဒါရိုက်တာဖရန်စစ်လောရင့်စ် (R) တို့သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့၊ (Pascal Le Segretain / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၉ ။ ငါဒဏ္Amာရီပါ
လွှတ်ပေးသည့်နှစ် - 2007
ရုရှားအရုပ်ရာသီ2လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
ဝီစမစ်၊ အဲလစ်ဘရာဂါ၊ ချာလီတာဟန်း၊ ဒက်ရှ်မီဟွတ်၊ အမ်မာ Thompson၊ စယ်လီရစ်ချတ်ဆန်၊ ဝီလိုစမစ်၊ ဂျိုဟန်နာမာတာ၊ Darrell Foster၊
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Will Smith & # 8217s ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည်လိုက်နာရန်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူက 2013 & # 8217s နှင့်အတူမှားယွင်းတဲ့လမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ ကမ္ဘာပျက်ပြီးနောက်, ပြန်လာပြီ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေသည့်တပ်ဖွဲ့, Netflix ၏မူလရုပ်ရှင်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် YouTuber ဖြစ်လာသည် တောက်ပ နှင့်ဒီနှစ်အတွက် Genie အဖြစ် & # 8217s ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ -action ကိုဇာတ်ကားပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Aladdin ။ ဒါပေမယ့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ A-lister အတွက်ချောချောမွေ့မွေ့ရွက်လွှင့်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ငါဒဏ္Amာရီ ပို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလရဲ့တလနဲ့ # 8217s ဟာ Netflix မှာအကောင်းဆုံးဖြန့်ချိတဲ့ရုပ်ရှင်အသစ်တွေကိုရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။
Richard Matheson ၏နာမည်တူဝတ္ထုကို အခြေခံ၍ ငါဒဏ္Amာရီပါ Will Smith သည် Robert Neville ဖြစ်သည်။ သူသည်လူသားများသေစေနိုင်သောရောဂါပိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲစေသောသေစေနိုင်သောကပ်ရောဂါမှလွတ်မြောက်လာသူဖြစ်သောသိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသည်နယူးယောက်မြို့ကို ဖြတ်၍ အခြားအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများကိုရှာဖွေနေစဉ်တွင်ရောဘတ်သည်ရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ဖန်တီးသည်။ သို့သော်သူသည် mutant များထက်အရေအတွက်များနေပြီးသူ၏နေ့ရက်များကိုကောင်းစွာရေတွက်နိုင်ကြောင်းသူသိသည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူသည်သူ့အားထိုးဖောက်ရန်အမှားတစ်ခုမှာလိုအပ်သည်။
ငါဒဏ္Amာရီပါ ဒါရိုက်တာ Francis Lawrence မှရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးကားတွင်ရိုက်ကူးထားသောဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်သည် The Hunger Games ဂိမ်း, ဆင်များအတွက်ရေ၊ စာငှက်နီ၊ အခြားအဓိကဂီတဗီဒီယိုများတွင် Britney Spears & # 8217 & # 8220I & # 8217m A Slave4U & # 8221 တေးဂီတဗီဒီယိုလည်းဖြစ်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုအပြုသဘောဆောင်စွာလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ၀ က်စမစ်အတွက်နောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့သော box office မှာနောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာ & # 8217s ဖြစ်နိုင်သောနောက်ဆက်တွဲအကြောင်းကိုစကားပြောနေပေမယ့်ထိုနေ့ရက်သည်မရောက်မှီတိုင်အောင်, ဒီthisပြီလ Netflix တွင်မူရင်းထွက်စစ်ဆေးပါ။
376555 02 - ဘုရင်မ Latifah နှင့် Angelina Jolie ကြယ်ပွင့်နှင့် # 8220 တွင်အရိုးစုဆောင်းသူ။ & # 8221 ဓာတ်ပုံအကြွေး: Takashi Seida Columbia / TriStar
၁၈ ။ အရိုးစုဆောင်း
မင်းသား Denzel Washington၊ Angelina Jolie၊ Queen Latifah၊ Michael Rooker၊ Mike McGlone, Luis Guzman, John Benjamin Hickey, Bobby Cannavale, Ed O & # 8217Neil, Leland Orser
သင်သဘောမတူနိုင်သော်လည်း၊ သင်မြင်ရသော & # 8217t မမြင်ဖူးသောရုပ်ရှင်အဟောင်းပေါ်တွင်ပစ်ချခြင်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအချိန်ကြာမြင့်စွာမြင်တွေ့ရသောဆိပ်ကမ်းတည်ရှိခြင်းထက် ပို၍ နွေးထွေးသောအရာမရှိပါ။ သင်နှင့် # 8217 အတူတူပါပဲ၊ ပြီးခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်ကားများမှနှစ်သိမ့်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာများကိုရှာဖွေပါက၊ သင် & # 8217 သည် ၁၉၉၉၉ အဓိကချုပ်ကိုင်ထားသောအပြုသဘောဆောင်သောခံစားချက်ဟုခံစားရပါလိမ့်မည်။ အရိုးစုဆောင်းသူ, အရာအကောင်းဆုံးလသစ် & # 8217s တစ်လအဖြစ် Netflix ကအပေါ်ရောက်ရှိလာသည်။
နာမည်တူ Jeffrey Deaver & # 8217s ရာဇဝတ်မှုဝတ္ထုကိုအခြေခံပြီး အရိုးစုဆောင်း နံပါတ်တစ်လူသတ်သမားကိုလိုက်လံရှာဖွေသည့်ရဲသားအမျိုးသမီးအမလီယာဒိုရာဟီအဖြစ်အန်ဂျလီနာဂျိုလီကိုသရုပ်ဆောင်ထားသည်။ အဆိုပါလူသတ် & # 8217 ခေါ်ဆိုခကဒ်သည်သူ၏ကံဆိုးသားကောင်များတစ် ဦး ချင်းစီကနေကျန်ရစ်အရိုး shards ဖြစ်ပါတယ်။ Amelia သည်မှုခင်းဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူလင်ကွန်းရစ် (Denzel Washington) အားလူသတ်သမားအားရာဇ ၀ တ်မှုများတွင်တွေ့ရသည့်သဲလွန်စများကိုအတူတကွကူညီရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ သူတို့အတူတကွလာမည့်ရည်မှန်းချက်ကိုကယ်တင်ရန်နိဂုံးချုပ်သည်။
အရိုးစုဆောင်း ဒါရိုက်တာ Phillip Noyce မှရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်သည် Patriot အားကစားပြိုင်ပွဲ, ဆား, နှင့် ပေးသူ ။ ရုပ်ရှင်ကားသည်ထုတ်လုပ်မှုအပြီးတွင်အပျက်သဘောဖြင့်လက်ခံခြင်းနှင့်ရောနှောခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဘတ်ဂျက်ငွေဒေါ်လာ ၄၈ သန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကမ္ဘာအနှံ့ဒေါ်လာ ၁၅၁ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သဖြင့်စီးပွားဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ တီဗီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အလားအလာသည်လေလှိုင်းများမထိမီဤနွေ ဦး တွင် Netflix ရှိမူရင်းနှင့် # 821790s ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
နောက်တစ်ခု:17. Monster အိမ်
၁၇ ။ Monster အိမ်
ဒါရိုက်တာ Gil Kenan
သရုပ်ဆောင် - Mitchell Musso, Sam Lerner, Spencer Locke, Steve Buscemi, Maggie Gyllenhaal, Kevin James, Nick Cannon, Jason Lee, Jon Heder, Catherine O & # 8217Hara, Fred Willard, Kathleen Turner, Ryan Newman
သင့်အိမ်ရှိအငယ်ဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်သူများနှင့်တွေ့ရလျှင်၊ Aprilပြီလတွင်စားသုံးရန်အတွက်၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်အသစ်သောအကြောင်းအရာအကြောင်းအရာအများစုမဟုတ်ပါ။ သင်၏အနိမ့်ဆုံး Netflix junkie သည်ယခုနွေ ဦး ရာသီတွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမည်ဆိုလျှင် streaming iantရာမသည်အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းထိတ်လန့်ဟာသဇာတ်ကားကိုထပ်မံထည့်သွင်းလိုက်သည်။ Monster အိမ်, တစ်ကြိမ်သာကာတွန်းတိုက်ခြင်းသည်everပြီလတွင်မင်း၏ပြည့်လျှံနေသည့်စောင့်ကြည့်စာရင်းထဲတွင်နေရာတစ်ခုရရန်ယှဉ်ပြိုင်နေသောအကောင်းဆုံးဖြန့်ချိသောရုပ်ရှင်ကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင် D.J. အောက်ပါအတိုင်း (Mitchell Musso), Chowder (Sam Lerner) နှင့် Jenny (Spencer Locke) တို့သည်သူငယ်ချင်းသုံးယောက်နှင့်လူကြီးများမှသူတို့သရဲခြောက်သည်ဟုထင်မှတ်သောအိမ်တစ်လုံးကိုကြေငြာသောအခါယုံကြည်သူများသည်အန္တရာယ်ရှိသောသက်ရှိသတ္တဝါဖြစ်သည်။ ဟယ်လိုဝိန်းလက်မနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှသူငယ်ချင်းသုံး ဦး သည်အပြစ်မဲ့သောလှည့်စားသူများကိုမနှိပ်စက်မီထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောအိမ်ကိုဖျက်ဆီးရန်အစီအစဉ်ကိုကြံစည်ခဲ့ကြသည်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ Kevin James, Nick Cannon နဲ့ Catherine O & # 8217Hara တို့လိုမှတ်မိလောက်တဲ့စွမ်းရည်တွေပါ ၀ င်ပါတယ်။
Monster အိမ် ၂၀၀၆ နွေရာသီတွင်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဝေဖန်သူများ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီရုပ်ရှင်ဟာအလယ်အလတ်ရှိတဲ့ Box Office ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်လာပြီးဒေါ်လာ ၇၅ မီလီယံဘတ်ဂျက်နဲ့ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းဒေါ်လာသန်း ၁၄၀ ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ စဉ်တွင် Monster အိမ် # 8217t သည်နာမည်ကောင်းမရခဲ့သည့်အတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်သည်အကောင်းဆုံး Animated Feature အတွက် Academy Award ရရှိခဲ့သည်။ စောင့်ကြည့်ကြီးပြင်းလာသူ Netflix ကမူးရူး - စောင့်ကြည့် Monster အိမ် နှင့်ပရိသတ်အသစ်များသည်movieပြီလထိပ်တွင်ရုပ်ရှင်ကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။
New York, New York & # 8211 မတ် 05: ဂျူလီယန် Moore သည်နယူးယောက်စီးတီးရှိမတ်လ ၅ ရက်၊ ၂၀၁၉ မတ်လ ၅ ရက်၊ ၉၂ လမ်းပေါ် Y ၌ပြသခြင်းနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်း။ (Dimitrios Kambouris / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၆ ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
ဒါရိုက်တာ Ivan Reitman
သရုပ်ဆောင် - David Duchovny, Julianne Moore, Orlando Jones, Seann William Scott, Ted Levine, Ethan Suplee, Michael Bower, Pat Kilbane, Ty Burrell, Dan Aykroyd, Katharin Town, Gregory Itzin, Ashley Clark, Stephanie Hodge, Kyle Gass, Sarah Silverman Richard Moll၊ Tom Davis၊ Jerry Trainor၊ Miriam Flynn၊ Steven Gilborn၊ John Cho
သင် Netflix ကိုဖြတ်သန်းနေစဉ်အချိန်တိုင်းဖြစ်ပျက်နေပါသည်။ သင် & # 8217 သည်ရွေးချယ်မှုများကိုသတိမဲ့စွာကြည့်ရှုပြီးသင်တစ်ခါမျှမကြားဖူးသောယခင်ရုပ်ရှင်ဟောင်းကိုတွေ့သည်။ & # 8220 ဒါ & # 8217s ရုပ်ရှင်တစ်ခုလား။ မင်းကမယုံနိုင်လောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်၊ ​​ရုပ်ရှင်ကသဲလွန်စမပါဘဲဘယ်လိုထွက်လာနိုင်မှာကိုစိတ်ရှုပ်နေပုံရတယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုရုပ်ရှင်သည်အကောင်းဆုံးကြိုတင်ကြံစည်မှုမရှိသောကြောင့်ငုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အများဆုံးဆိပ်ကမ်း & # 8217t ကြားသိခဲ့ရသောခိုးကြောင်ခိုးဝှက်သံသယဖြစ်သည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၊ အကောင်းဆုံးအသစ်ဖြန့်ချိAprilပြီ & # 8217s တစ်ခု။
ဒေးဗစ် Duchovny အတွက်သရုပ်ဆောင် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အရီဇိုးနားတွင်ဥက္ကာပျံပျက်ကျမှုကိုဘူမိဗေဒပညာရှင် Harry Block (Orlando Jones) နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်ကောလိပ်ပါမောက္ခ Ira Kane ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံဝတ္ထုဟာသတစ်ခုမှာဥက္ကာပျံ၌ထူးဆန်းသောသတ္တဝါများအဖြစ်သို့အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲလာသည့်ဂြိုလ်သားတို့၏ဘဝပုံစံများပါဝင်သည်ဟူသောသူတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ပရမ်းပတာကိုခြေရာခံသည်။ Ira Kane၊ Harry Block နှင့် Wayne Grey (Seann William Scott) နှင့်ဒေါက်တာ Allison Reed (Julianne Moore) တို့ပါဝင်သောသူတို့၏အဖွဲ့သည်ကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးရန်အတွက် s ည့်သည်များနှင့် # ၈၂၁၇ ကြံစည်မှုကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသူတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည်။
netflix အပေါ် fargo စီးရီးဖြစ်ပါတယ်
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဒါရိုက်တာ Ivan Reitman မှရိုက်ကူးသူလည်းဖြစ်သည် သရဲ (ဖြစ်ကောင်းသင် & # 8217 ကြားဖူးတယ်)၊ သူငယ်တန်းရဲ, အစင်း, နှင့် နှောင်ကြိုးမဲ့ အခြားသူတွေအကြား။ ရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လွှင့်သည့်အခါဝေဖန်သူများထံမှရောနှောလက်ခံမှုရရှိခဲ့ပြီး ၄၄% သော Rotten Tomatoes အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၈၀ မီလျံဘတ်ဂျက်နှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ဒေါ်လာ ၉၈.၄ သန်းရရှိခဲ့သည် ယခုနှင့်၎င်းသည် # 8217s ကိုအချိန်ကာလ၏အခြေအနေမှဖယ်ရှားပြီးသောအခါ၊ Aprilပြီလ Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်သောအခါပရိသတ်အသစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
နောက်တစ်ခု:၁၅။ Ya-Ya Sisterhood ၏မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ
ကမ္ဘာကြီးသည်သဘောတူနိုင်သောအရာအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာစန်ဒရာ Bullock ဖြစ်သည်။ မင်းနဲ့ # 8217 ကိုရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်တွေနဲ့ချိန်းတွေ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်နဲ့သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်စာရင်းကိုနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ရှာမတွေ့တဲ့သူကိုရှာဖို့ဖိအားပေးခံရပါလိမ့်မယ် သင်အိပ်နေစဉ် နှင့် Netflix & # 8217s တပ်များအာရုံခံစားမှုအဖြစ်မကြာသေးမီက hits ငှက်သေတ္တာ ။ ယခုနွေ ဦး တွင် Bullock & # 8217s ယခုနည်းပါးသောလူသိများသောအစောပိုင်းအံ့သြဖွယ်ဇာတ်ကားများနှင့်ပြန်လည်ရင်းနှီးလာရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါ။ Ya-Ya Sisterhood ၏မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ မင်းရဲ့စောင့်ကြည့်စာရင်းကိုဝင်လိုက်ပြီ
နာမည်တူစာအုပ်နှင့်၎င်း၏ prequel ပုံပြင်များစုဆောင်းခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး နေရာတိုင်းမှာ Little ကယဇ်ပလ္လင် ရေဗက္ကာဝဲလ်က Ya-Ya Sisterhood ၏မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ ကျော်ကြားသောနယူးယောက်ပြဇာတ်ရေးဆရာ Siddalee Walker (စန်ဒရာ Bullock) နောက်သို့လိုက်သည် သူမ၏နောက်ဆုံးပေါ်ပြဇာတ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်သောအခါသူမမကျေနပ်သည့်ကလေးဘဝကိုမဂ္ဂဇင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူမ၏မိခင်ဗီဗီယန် (Ellen Burstyn) ကိုစိတ်ပျက်စေသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ Ya-Ya Sisterhood ဟုခေါ်သော Vivian & # 8217 သူငယ်ချင်းများ Siddalee ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီး Louisiana သို့ပို့ဆောင်သည်။
Ya-Ya Sisterhood ၏မြင့်မြတ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူစာရေးဆရာဒါရိုက်တာ Callie Khouri မှဖြစ်သည် Thelma & amp Louise နှင့် စကားပြောရန်တစ်ခုခု Mad Money ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Connie Britton ဦး ဆောင်သောဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲကိုဖန်တီးခဲ့သည် Nashville ။ ရုပ်ရှင်ကားသည်ဝေဖန်သူများ၏လက်ခံမှုကိုအရောအနှောရရှိခဲ့ပြီး ၄၃% သော Rotten Tomatoes ၏ဝင်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၇၃.၈ သန်းဖြင့် Box Office ၏ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Don & # 8217 သည်လ၏ထိပ်ပိုင်း Netflix တွင်စတင်လွှင့်သောအခါဤမေ့နေသော Sandra Bullock ဂန္ထဝင်ကိုလက်လွတ်သည်။
၁၄ ။ အဆိုပါတိတ်ဆိတ်
လွှတ်ပေးသည့်နှစ် - 2019
အားဖြင့်ဒါရိုက်တာ John R. Leonetti
သရုပ်ဆောင် - Kiernan Shipka, Stanley Tucci, Miranda Otto, John Corbett, Kate Trotter, Kyle Breitkopf
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 10ပြီ ၁၀ ရက်
ဤသည်မှာယခုAprilပြီလ Netflix သို့လာမည့်အသစ်သောထိတ်လန့်ဖွယ်ရွေးချယ်မှုများမဟုတ်နိုင်သော်လည်းအထူးအပိုဆုကြေးတစ်ခုရရှိရန်ရှိနေသည် Sabrina ၏ Adventures ကိုအေး ပရိတ်သတ်တွေ။ သင် & # 8217re ရက်အနည်းငယ်အကြာAprilပြီ5ရက်နေ့တွင်ပထမရာသီ၏ဒုတိယအပိုင်းပြီးသွားပြီးနောက်ပိုပြီးဆာလောင်မွတ်သိပ်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုရင်, Kiernan Shipka မူရင်းထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်အသစ်ခေါင်းစဉ် အဆိုပါတိတ်ဆိတ် ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကြောင့်၎င်းရဲ့သွန်းနှင့်၎င်း၏သရဲခြောက်တဲ့ရဝုဏ်၏ကြောင့် & # 8217s တစ်လ & # 8217s အပြင်းထန်ဆုံးဖြည့်စွက်။
Tim Lebbon မှ ၂၀၁၅ တူညီသောဝတ္ထုကို အခြေခံ၍ အဆိုပါတိတ်ဆိတ် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် Ally Andrews (Kiernan Shipka) ၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်နားမကြားသောဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာကြီးသည်အသံအားဖြင့်ဖမ်းဆီးရမိသောသတ္တဝါများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်မိသားစုကိုခိုလှုံရန်ရှာဖွေနေသည်။ သို့သော်သူတို့၏လုံခြုံသောနေရာသို့ရောက်သောအခါ Ally & # 8217s မြင့်မားသောအာရုံများ၏အားသာချက်ကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းနေသောဆိုးညစ်ယုတ်မာသည့်အစွန်းရောက်မှုများကိုကြုံတွေ့ရသည်။ အဆိုပါတိတ်ဆိတ် Stanley Tucci၊ John Corbett နှင့် Shipka & # 8217s တို့ကိုလည်းသရုပ်ဆောင်သည် Sabrina Miranda Otto ကုန်ကျသည်
အဆိုပါတိတ်ဆိတ် ဒါရိုက်တာ John R. Leonetti မှလည်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည် Annabelle နှင့် အပေါ်သို့ Wish ။ ဒီရုပ်ရှင်ကို Global Road Entertainment က ၂၀၁၇ မှာဖြန့်ချိခဲ့ပြီး Kiernan Shipka ၏အောင်မြင်မှုအပြီးတွင်ဝယ်ယူခဲ့သည် Sabrina ၏ Chilling Adventures, ရုပ်ရှင် Netflix သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာနားမကြားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုပုံဖော်တဲ့အတွက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပေမယ့် အဆိုပါတိတ်ဆိတ် အကယ်စင်စစ်စကားပြောဆိုမှုတစ်ခုစတင်နှင့်လာမည့်ထိတ်လန့်ထိခိုက်ဘို့ပရိသတ်ကိုအဆင်သင့်ရှာတွေ့လိမ့်မည်။ Don & # 8217t သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ရပ်များပြီးနောက်ငါးရက်အကြာတွင်theပြီ ၁၀ ရက်တွင်ပြသခြင်းကိုခံရမည် Sabrina ။
နောက်တစ်ခု:ဂျေဆန် vs. 13. Freddy
HOLLYWOOD & # 8211 သြဂုတ် ၁၃ - သရုပ်ဆောင် Jason Ritter သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ဟောလိဝုဒ်တွင် ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်၊ Cineramadome ပြဇာတ်ရုံ၌ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သော & # 8220Freddy vs Jason & # 8221 ၏ရုပ်ရှင် Premiere သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (ဖရက်ဒရစ်အမ်ဘရောင်း / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၃ ။ ဂျေဆန် vs. ဖရက်ဒီ
ဒါရိုက်တာ Ronny Yu
သရုပ်ဆောင် - Monica Keena, Kelly Rowland, Jason Ritter, Robert Englund, Ken Kirzinger, Chris Marquette, Lochlyn Munro, Katharine Isabelle, Brendan Fletcher, Zack Ward
Netflix တွင်လများစွာသည်သင်ထုတ်လွှတ်သောစာရင်းအသစ်နှင့်ရှာဖွေနိူင်သောအဓိကအမျိုးအစားများအနက်တစ်ခုမှာထိတ်လန့်စရာဖြစ်သည်။ ဟယ်လိုဝိန်းမည်မျှဝေးဝေးနေပါစေသို့မဟုတ်ခရစ်စမတ်သည်အလှည့်ကျရောက်နေပြီဆိုလျှင်စီးဆင်းနေသောgရာမလူများသည်သူတို့၏ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများအတွက်အမြဲကယ်တင်တတ်ကြသည်။ သို့သော်ယခုနွေ ဦး ရာသီတွင်အသစ်ဖြည့်စွက်မှုများသည်အလန့်တကြားဖြစ်သွားသည်။ မည်သည့်ဂန္ထဝင်သို့မဟုတ်မကြာသေးမီကအဓိကအောင်မြင်မှုများအစား, ၂၀၀၃ crossover ဂျေဆန် vs. ဖရက်ဒီ streaming များနှင့်လိုအပ်သောအင်တာနက် meme-ing များအတွက်ရောက်ရှိလာသည်။
အကြားတစ် crossover ၌တည်၏ Elm လမ်းပေါ်မှာအိပ်မက်ဆိုး နှင့် သောကြာနေ့ ၁၃ ရက်တွင် Freddy သည် Jason ဖြစ်သည် တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆန့်ကျင်။ သက်ဆိုင်ရာလူသတ်သမားများအားထိုးဖောက်ခြင်းဖြင့်အထင်ကရရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှစ်ကားအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုမျှဝေသည်။ လူတွေကသူ့ကိုကြောက်လန့်မှုနည်းလာတဲ့အချိန်မှာ Freddy Krueger (Robert Englund) ကသူ့စွမ်းအားတွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်။ သူ့ကိုဂျေဆန် Vorhees (Ken Kirzinger) ကသတ်ပစ်ဖို့ကြိုးစားမှုအသစ်ကိုကြံစည်ဖို့အကူအညီတောင်းခံစေခဲ့တယ်။ Jason က Freddy & # 8217s ခြေချောင်းတွေစလိုက်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်ဟာတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး လှည့်လာကြတယ်။
ဂျေဆန် vs. ဖရက်ဒီ Rotten ခရမ်းချဉ်သီးတွင် ၄၁ ရာနှုန်းရရှိထားပြီးနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများ၏ပရိသတ်များအတွက်မှတ်ယူသည်။ သို့သော်၎င်း၏ဒေါ်လာ ၃၀ မီလျံဘတ်ဂျက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ထိုရုပ်ရှင်သည်ဒေါ်လာ ၁၁၄ သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပထမဆုံးသောဝင်ငွေအများဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည် သောကြာနေ့ ၁၃ ရက် ဂိမ်းနှင့်အတွက်ဒုတိယအမြင့်ဆုံး - စုစုပေါင်း Elm လမ်းပေါ်မှာအိပ်မက်ဆိုး franchise ။ သင် & # 8217 သည်ဤ ၂၀၀၃ slasher showdown gem ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားနေသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကAprilပြီလထိပ်တွင်နာရီတစ်လုံးပေးရမည်။
၁၂ ။ ပဉ္စမဒြပ်စင်
ထုတ်ပြန်သည့်နှစ် - ၁၉၉၇
ဒါရိုက်တာ: Luc Besson
မင်းသား: Bruce Willis၊ Gary Oldman၊ Ian Holm၊ Milla Jovovich၊ Chris Tucker၊ Luke Perry, Brion James, Tommy & # 8221 Lister Jr. , Lee Evans, Charlie Creed-Miles, Tricky, Ma & iumlwenn Le Besco
ဒီနေ့နှင့် reboots, revivals, sequel နှင့် remake တို့၏ခေတ်ကာလတွင်၎င်းသည်စားပွဲပေါ်တွင်ရှိနေသကဲ့သို့ထင်ရပါသည်။ အဘယ်သူမျှမ & # 8217s အကြိုက်ဆုံးအလွန်ကြီးစွာသောကျော်လွန်ပြီးမှယူဆောင်ခံရခြင်းမှလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။ ဟောလိဝုဒ်သည်အသစ်သောအကြောင်းအရာအသစ်များကိုဖန်တီးရန်အချိန်ပြန်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်ထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့်အံ့သြစရာဖြစ်သည် ပဉ္စမဒြပ်စင် hasn & # 8217t ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးဂုဏ်သတင်းကန့်သတ်ထားသောစီးရီးအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီမှာဖြစ်ဖို့အချိန်ရှိနေသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် # 8217s ကတော့သေချာတဲ့တစ်ခုတော့ & # 8217s - ဒီလထဲမှာဒီရှေးရိုးစွဲဂန္ထဝင်ဟာသင့်ရဲ့စောင့်ကြည့်စာရင်းကိုဝင်သွားတယ်။
Bruce Willis မှာသရုပ်ဆောင်ထား ပဉ္စမဒြပ်စင် ၂၃ ရာစုနယူးယောက်မြို့ cabbie Korben Dallas သည် Leeloo (Milla Jovovich) ကသူ၏တက္ကစီထဲသို့ ၀ င်သောအခါကမ္ဘာ့အလယ်ဗဟိုတွင်ကံကြမ္မာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ Leeloo သည်ပဉ္စမအချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်သော်လည်းသူမသည်အခြား Element လေးခုနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးကမ္ဘာကြီးကိုပျက်စီးစေမယ့် Great Evil 82G နှင့်အတူပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ခမညျးတျော Vito Cornelius (Ian Holm) နှင့် Ruby Rhod (Chris Tucker) တို့၏အကူအညီနှင့်အတူ Dallas သည်လူသားများ၏ဘေးကင်းရေးအတွက် Zorg (Gary Oldman) ကိုတိုက်လှန်ရမည်။
ပဉ္စမဒြပ်စင် ဒါရိုက်တာ Luc Besson မှလာသည် လူစီ နှင့် Valerian နှင့် Planet ထောင်ပေါင်းများစွာ၏မြို့တော် ။ ဖြန့်ချိပြီးသည့်နောက်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဝင်ငွေဒေါ်လာ ၂၆၃ သန်းဖြင့် Box Office အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ရုပ်ရှင်သည်ဝေဖန်သူများကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင် Rotten Tomatoes တွင် ၇၁ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ခြင်းတွင်အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ပဉ္စမဒြပ်စင် သင်Aprilပြီလ Netflix တွင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့်ရဲရင့်သောအမွေကိုထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
UNIVERSAL CITY, CA & # 8211 ဇွန် 01: မင်းသမီး Seth Rogen (L) နှင့် James Franco တို့သည်ဇွန်လ ၁ ရက်တွင် Gibson ပွဲကြည့်စင်၌ကျင်းပသည့် ၁၇ နှစ်မြောက် MTV Movie Awards တွင်အကောင်းဆုံးနွေရာသီရုပ်ရှင်နှင့် # 8220Iron Man & # 8221 ကိုချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ , ကယ်လီဖိုးနီးယား, Universal စီးတီး၌, 2008 ။ (Kevin Winter / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
ဒါရိုက်တာ David Gordon Green
သရုပ်ဆောင်များက: သရုပ်ဆောင် Reth ဂျိမ်းစ် Franco၊ Danny McBride၊ Gary Cole၊ Kevin Corrigan၊ Craig Robinson၊ Rosie Perez၊ Ken Jeong၊ Amber Heard၊ Ed Begley Jr. , Nora Dunn, Joe Lo Truglio, Cleo King, Bill Hader
ဒါဟာအချို့အရာများအတူတကွပိုကောင်းသွားကြောင်းသက်သေပြဆိုတဲ့အချက်ကို & # 8217s ။ မြေပဲထောပတ်နှင့်ဂျယ်လီ။ Lady Gaga နှင့် Bradley Cooper ။ ဂျိမ်း Franco နှင့်ရှေ Rogen ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကရာဇ ၀ တ်မှုခဏတာနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် Freaks နှင့် Geeks, Franco နှင့် Rogen တို့သည်ဟာသအခင်းအကျင်းကိုလုံးဝပြောင်းလဲပစ်ရန်အတွက်သူဌေးဟောင်း Judd Apatow နှင့်အတူတကွပူးပေါင်းလေ့ရှိသည်။ ဒီစွမ်းရည်အဖွဲ့ဟာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အလယ်လောက်မှာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းတွေလိုရုပ်ရှင်တွေနဲ့အတူ box office ကိုလွှဲပြောင်းယူလိုက်တယ် နာနတ်သီးအမြန်, အရာယခုလ Netflix ကမှကြွလာ။
ဒါ့အပြင်တီးခတ်သူဒါရိုက်တာ David Gordon Green မှ မင်းရဲ့မြင့်မြတ်မှု နှင့် The Sitter အဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ် & # 8217s အဖြစ်အပျက် hit ဟယ်လိုဝင်း, နာနတ်သီး Express ကို Seth Rogen ကို Dale Denton အမည်ရှိ Stoner အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လူသတ်မှုကိုသက်သေခံသည့်အနေဖြင့်ဒေးလ်သည်သူ၏ဥယျာဉ်မှောက်ကျသွားသောအခါရှားပါးသောပေါင်းပင်များ၏မျိုးစိတ်ကိုသူနှင့်သူ၏ကုန်သည် Saul Silver (ဂျိမ်းစ်ဖရန်ကို) အားပြန်လည်တွေ့ရှိနိုင်ကြောင်းသူသိသည်။ ၎င်းသည်ဒေးနှင့်ရှောလုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်း (ဂယ်ရီကိုးလ်) နှင့်အမြီးပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်း (Rosie Perez) နှင့်အတူပြေးရန်တွန်းအားပေးသည်။
နာနတ်သီးအမြန် လွှတ်ပေးခြင်းအပေါ်ဝေဖန်သူများ၏အပြုသဘောဆောင်သောသုံးသပ်ချက်များကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ ပုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးများ၌ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ကျော်သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စုစုပေါင်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုရရှိခဲ့သည်။ ဂျိမ်းစ်ဖရန်ကိုသည်သူ၏ကမ္ဘာအတွက်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်ဖရန့်ကိုနှင့်ရိုဂျင်တို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုတွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုအရိပ်အမြွက်ပြပြီးဖြစ်သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Sony hack တွင်ကောလဟလကိုတရားဝင်ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ဂိုဏ်းအတူတူပြန်လည်ပေါင်းစည်းသည်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မူရင်းဂန္ထဝင်အမြဲတမ်းရှိသည်။ April Fool & # 8217s နေ့မှ စ၍ စစ်ဆေးပါ။
နယူးယောက်နှင့် ၈၂၁၁ 23ပြီ ၂၃ - ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ Yorkပြီ ၂၃ ရက်၊ နယူးယောက်မြို့ရှိ Visual Arts ကျောင်းတွင်ဘီယွန်းစ်နူးလီစ်သည် Visual Arts ကျောင်းတွင် Cinema Society နှင့် MCM စိစစ် & # 8220Obsessed & # 8221 သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (Bryan Bedder / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၁၀ ။ Obsessed
ဒါရိုက်တာ Steve Shill
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် - Idris Elba၊ Beyonc & eacute Knowles၊ Ali Larter၊ Nathan နှင့် Nicolas Myers, Christina Lahti, Scout Taylor-Compton, Jerry O & # 8217 Connell, Bruce McGill, Matthew Humphreys, Richard Ruccolo
Beyonc & eacute သည်သူမ၏အံ့အားသင့်ဖွယ်အယ်လ်ဘမ်ကျဆင်းခြင်းနှင့်အတူအခြေခံအားဖြင့်တေးဂီတကိုဖွင့်သည်ကိုငါတို့အားလုံးသိကြသော်လည်းသူမသည်တစ်ချိန်ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်ကိုမေ့သွားသည် Grammy ဆုရှင်သည် live action ရုပ်ရှင်တွင်ပါဝင်သည့်နောက် ၁၀ နှစ်နီးပါးကြာခဲ့ပြီးယခုလသည် Netflix သို့ချက်ချင်းထုတ်လွှင့်ရန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, Beyonc & eacute ကိုဒီနွေရာသီမှာ & # 8217s မှာနောက်ထပ်မြင်နိုင်ပါပြီ ခြင်္သေ့ဘုရင်, ဒါပေမယ့် Obsessed ဒီနှစ်itsပြီလရဲ့ ၁၀ နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပ
Obsessed Idris Elba ကို Derek Charles အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလုပ်ခွင်တွင်ရာထူးတိုးပေးခြင်းခံခဲ့ရပြီး၎င်းသည်အလွန်ကြီးစွာသောဘဝ၏ချယ်ရီဖြစ်သည်။ သူနှင့်သူ၏ဇနီးရှာရုန် (Beyonc & eacute) တို့သည်သက်သောင့်သက်သာဘဝဖြင့်အတူတကွနေထိုင်ကြသည်။ သို့သော်ယာယီအလုပ်လုပ်သည့် Lisa (Ali Larter) သည်သူမကိုစော်ကားရန်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများနှင့်စတင်ကျင့်သုံးသောအခါသူတို့၏ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းသည်မကြောက်မရွံ့ဖြစ်လာသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို Fatal Attraction နဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ပြီး Alfred Hitchcock ရဲ့လက်ရာတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။
Box Office ၏အဖွင့်သီတင်းပတ်ကုန်ရက်တွင်ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၇၃ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ Obsessed Rotten ခရမ်းချဉ်သီးတွင် ၁၉ ရာခိုင်နှုန်းမျှသာကိုင်ထားသည်ကိုဝေဖန်ရေးသမားများကဝေဖန်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် Queen Bey ပါ ၀ င်နေတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်တွေကအနုတ်လက္ခဏာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဂရုမစိုက်ကြဘူး။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှရုပ်ရှင်သည်ချီးမွမ်းမှုတိုးပွားလာလိမ့်မည်။ Beyonc & eacute နှင့် Ali Larter တို့သည် MTV Movie Award ဆုကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိသူတို့၏ရန်ပွဲမြင်ကွင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဆုရရှိခဲ့သည်။ သင်နှင့် # 8217 သည် ၁၀ နှစ်သက်တမ်းရှိသောသဘောင်္ကိုတစ်လ၏ထိပ်ပိုင်း Netflix သို့ရောက်သောအခါထပ်ခါထပ်ခါစိတ်စွဲလမ်းနေလိမ့်မည်။
နယူးယောက်၊ နယူးယော့ခ်နှင့် ၈၂၁၁ မေ ၂၁ - New York City၊ မေလ ၂၁ ရက်၊ Vulture ပွဲတော်တွင် Alamo Drafthouse ပြဇာတ်ရုံ၌ Band Aid ပြသခြင်းကို Zoe Lister-Jones နှင့် Adam Pally တို့တက်ရောက်ကြသည်။ (Vulture ပွဲတော်အတွက် Ilya S. Savenok / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၉ ။ ဆေးပလာစတာ
ဒါရိုက်တာ Zoe Lister-Jones
သရုပ်ဆောင် - Zoe Lister-Jones၊ Adam Pally, Fred Armisen, Susie Essman, Hannah Simone, Retta, Ravi Patel, Brooklyn Decker, Chris D & # 8217Elia, Erinn Hayes, Jesse Williams, Colin Hanks, Jamie Chung, Nelson Franklin, Angelique Cabral၊ Majandra Delfino, Gillian Zinser
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - သောကြာနေ့၊ Aprilပြီ ၁၂
ဟာသဇာတ်လမ်းတွေမှာ various ည့်သရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ in အမျိုးမျိုးမှာပါဝင်ပြီးဖျော်ဖြေမှုအားလုံးကိုခိုးယူတဲ့အနုပညာရှင်တချို့ရှိတယ်။ မကြာခင်မှာပဲသူတို့ဟာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ထုတ်ဖော်ဖို့အခွင့်အရေးတောင်မရခင်မှာငါတို့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်တွေပါ။ ကံကောင်းတာက၊ Zoe Lister-Jones ဟာဟာသနေရာမှာအကောင်းဆုံးနေရာကိုဖန်တီးထားပြီးကမ္ဘာကြီးကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့သည်။ ဆေးပလာစတာ ။ ယခုလ Netflix သို့လာမည့် Indie ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို ရွေးချယ်၍ Lister-Jones & # 8217 ဒါရိုက်တာပွဲ ဦး ထွက်သည်လ၏အကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးလောင်းကစားဖြစ်သည်။
ဆေးပလာစတာ အိမ်ထောင်သည်မောင်နှံစုံအန္န (Zoe Lister-Jones) နှင့်ဘင် (Adam Pally) တို့ကိုအဓိကထားပြီးတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်တိုက်ခိုက်မှုများရပ်တန့်သွားပုံရသည်။ သူတို့ရဲ့ကုထုံးဆရာကသူတို့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။ သူတို့စုံတွဲဟာတေးဂီတကိုနှစ်သက်တဲ့စိတ်ကိုမှတ်မိနေတယ်။ သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အန္နနှင့်ဘင်တို့သည်သူတို့၏တိုက်ပွဲများကိုသီချင်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးအိမ်နီးချင်း Dave (Fred Armisen) နှင့်အတူတီးဝိုင်းတစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်၎င်း၏ထူးခြားသောနှင့်တစ်မူထူးခြားသည့်ဇာတ်လမ်းကိုချီးမွမ်းရန်အကောင်းဆုံးနှင့် underrated ဟာသစွမ်းရည်အချို့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဆေးပလာစတာ သူမ၏ကျွမ်းကျင်သောရုပ်ပြအချိန်ဇယားကိုယူဆောင်လာခဲ့သူ Zoe Lister-Jones ၏အင်္ဂါရပ်ဒါရိုက်တာပွဲ ဦး ထွက်ဖြစ်သည် မိန်းကလေးအသစ် နှင့်ဖြစ်သော CBS sitcom အပိုင်းအစများအတွက်ဘဝ ။ Lister-Jones သည်လာမည့်ထိုးနှက်ချက်ကိုရေးပြီးညွှန်ကြားလိမ့်မည်ဟုလည်းသတင်းပို့ခဲ့သည် & # 821790s အစွန်းရောက်ဂန္တစ် ဦး ဇာတ်ကား The Craft ။ ဆေးပလာစတာ ပထမ ဦး ဆုံး 2017 Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြသခဲ့သည်နှင့်ပုပ်ခရမ်းချဉ်သီးအပေါ်အထင်ကြီး 85% လတ်ဆတ်တဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ သင် & # 8217re ၏ Lister-Jones & # 8217 အနက်ကိုမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုရင် အဆိုပါယာဉ်, flပြီ ၁၂ ရက်က Netflix သို့ရောက်သည့်အခါသူမ၏ဒါရိုက်တာ၏ပွဲ ဦး ထွက်ကိုသေချာအောင်စစ်ဆေးပါ။
၈ ။ နယူး Romantic
လွှတ်ပေးသည့်နှစ် - 2018
By: Carly Stone
သရုပ်ဆောင်: ဂျက်စီကာ Barden, Hayley Law, Brett Dier, Avan Jogia, Timm Sharp, Camila Mendes, Darren Eisnor, Vinnie Bennett, Annie Clark
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - တနင်္လာနေ့၊ 15ပြီ ၁၅ ရက်
တခါတရံမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့မှာပရိသတ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရောက်ရှိဖို့အမြဲအခွင့်အရေးရှိတယ်။ ကံကောင်းတာက Netflix ကိုသွားနေတဲ့မကြာသေးမီကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Indie ရုပ်ရှင်ကားတွေကတော့ဆက်ရှိနေ ဦး မှာပဲ နယူး Romantic ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်အသစ်သောရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူတစ် ဦး ၏နောက်ကောက်ပွဲဖြစ်သည် ကမ္ဘာ၏အဆုံး၊ Riverdale, နှင့် အပျိုစင်ဂျိန်း ။ သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူညညအတွက်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လတစ်လနှင့် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးအသစ်ဖြည့်စွက်မှုများဖြစ်သည့် ၈၂၁၇ ဖြစ်သည်။
ဂျက်စီကာဘားဒါးအတွက်သရုပ်ဆောင် နယူး Romantic Blake Conway အနေဖြင့်လိင်ကော်လံကိုရေးသည်။ သို့သော်သူမ Carrie Bradshaw-esque အရေးအသားကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုအတိအကျထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကောလိပ်မှအကြီးအကဲသည်ကြွယ်ဝချမ်းသာသူနှင့် # 8217s သကြားဖေဖေအားအကြွေးတင်မည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအားဖြင့်သကြားကလေးဖြစ်လာသည်။ သူမသည်သူမအတွက်စွန့်စားခန်းများအကြောင်းစာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည့်စာနယ်ဇင်းသမားဆုကိုငွေရရှိရန်ကတိပေးပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် # ၈၂၁၇ တို့၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့်တန်ဖိုးနှင့်တန်ဖိုးတစ်ခုအပေါ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးအခေါ်များကိုရေးသားခဲ့သည်။
နယူး Romantic စာရေးဆရာ - ဒါရိုက်တာ Carly Stone ၏ပွဲ ဦး ထွက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည်တောင်ကိုရီးယားအနောက်တောင်ပိုင်းတွင်မတ်လ ၂၀၁၈ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြသခဲ့ပြီးထိုဇာတ်ကားသည်ဂျူရီနှင့် # ၈၂၁၇ ဇာတ်ကားများအတွက်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်သည်သေးငယ်သည့် Cin & eacutefest Sudbury အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ပြသခဲ့ပြီး Orchard မှပြဇာတ်ရုံအနည်းငယ်ကန့်သတ်ချက်ရရှိခဲ့သည်။ သင်ဟာဒီAprilပြီလ Netflix ကိုပွဲ ဦး ထွက်ပြတဲ့အခါဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့ရင်ခုန်စရာဇာတ်လမ်းကိုလက်လွတ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
CANNES, FRANZA & # 8211 မေ 15: (LR) မင်းသမီး Riley Keough၊ Sasha Lane၊ ဒါရိုက်တာ Andrea Arnold နှင့်သရုပ်ဆောင် Shia LaBeouf တို့သည်မေလ ၁၅ ရက်၊ Palais des Festivals တွင်ကျင်းပသော & # 8220American Honey & # 8221 photocall သို့တက်ရောက်ကြသည်။ , ပြင်သစ်, ပြင်သစ်၌, 2016 ။ (Ian Gavan / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၇ ။ အမေရိကန်ပျားရည်
ညွှန်ကြားသည် - Andrea Arnold
သရုပ်ဆောင် - Sasha Lane၊ Shia LaBeouf, Riley Keough, Arielle Holmes, McCaul Lombardi
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - စနေနေ့၊ 27ပြီ ၂၇
တစ်ခါက Shia LaBeouf သည်သူ၏ဒစ္စနေး Channel မှစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး အနေနှင့်အလားအလာရှိသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဘဝကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူကဲ့သို့သောလူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် Disturbia နှင့်၏နောက်ဆက်တွဲသို့မိမိအလမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် Wall Street နှင့် အင်ဒီယားနားဂျုံးစ် ။ အချို့သောကြမ်းတမ်းတဲ့ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများရှိနေသော်လည်းသူ & # 8217s သည်တီထွင်ဖန်တီးမှု၏ကန့်သတ်ချက်များကိုတိုးချဲ့သော Indie ရုပ်ရှင်ကားများ၏သက်တောင့်သက်သာရှိသောဇုန်ထဲသို့အခြေချခဲ့သည်။ သူတို့အား Indie ဇာတ်ကားတစ်ခုမှာ A24 & # 8217s ဖြစ်သည် အမေရိကန်ပျားရည်၊ အရာအလွန်အမင်းယခုလလွှတ်ပေးရန်အပေါ်သို့ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်သည် Sasha Lane အဖြစ် Star အဖြစ်ပြသခဲ့သည်။ စိတ်သောကရောက်နေသည့်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အနောက်တောင်ပိုင်းကို ဖြတ်၍ ကားမောင်း။ မဂ္ဂဇင်း subscriptions ကိုတစ်အိမ်မှတစ်အိမ်ရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤအဖွဲ့သစ်တွင်သူမပါဝင်ပတ်သက်လာသည်နှင့်အမျှ Jake (Shia LaBeouf) နှင့်ပိုမိုရင်းနှီးလာပြီးဥပဒေ၏ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အလွန်အကျွံပါတီ ၀ င်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းတို့၏လှိုင်းထနေသောလူနေမှုပုံစံစတိုင်တွင်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာတစ်ချိန်ကလာမယ့်အသက်အရွယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်အနှစ်တစ်ထောင် Indie အထုပ်ထဲမှာအတူတကွချည်ထားသောလမ်းခရီးစဉ်ဒရာမာမှာချက်ချင်း # 8217s ။
အမေရိကန်ပျားရည် ဇာတ်လမ်းတွဲများစွာကိုညွှန်ကြားသည့်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာ Andrea Arnold မှလာသည် ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော နှင့် ဒစ်ခ်ကိုငါချစ်တယ် လာမည့်ဒုတိယရာသီအတွက်ဒါရိုက်တာ၏အခန်းကဏ္scoringကိုသွင်းယူမီ လိမ်မာကြီး ။ ရုပ်ရှင်သည် Palmed& # 8217Or အတွက်ကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးဂျူရီဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပျားရည် အကောင်းဆုံးဗြိတိန်ရုပ်ရှင်ဆုအတွက် BAFTA ဆုအတွက်ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီးခရမ်းချဉ်သီးများ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့သည်။ Don & # 8217 သည်flပြီလကုန်တွင် Netflix ကိုထိသောအခါဤစစ်မှန်သော Indie ချစ်သူကိုလက်လွတ်သည်။
ဇူလိုင် ၁၆ ရက်။ HOLLYWOOD & # 8211 ဇူလိုင် ၁၆ - မင်းသမီး Katherine Heigl (L) နှင့်သရုပ်ဆောင် Gerard Butler တို့သည်ကိုလံဘီယာ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ၂၀၀၉၊ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်တွင် Pacific & C # 1522s Cinerama Dome တွင်ကျင်းပသော Ugly Truth & # 8221 ၏ Columbia Pictures & # 8217 ၏ Premiere သို့ရောက်ရှိသည်။ (Kevin Winter / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၆ ။ အရုပ်ဆိုးအမှန်တရား
ဂျိမ်းစ်မိုက်ကယ်ဟစ်ဂင်၊ Bree Turner၊ ကီဗင်ကွန်နိုလီ၊ Bonnie Somerville၊ Yvette Nicole Brown၊ Allen Maldonado၊ Craig ဖာဂူဆန်
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - ကြာသပတေးနေ့၊ Aprilပြီ ၂၅ ရက်
လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများသည်ရင်ခုန်စရာကောင်းသည့်အခန်းကဏ္ over သစ်များနှင့်အတူ Box Office တွင်အဓိကကစားသမားများဖြစ်နေသေးသည်ကိုမှတ်မိရန်အရူးဖြစ်၏။ ထိုအခါ Grey က & # 8217s ခန္ဓာဗေဒ အောင်မြင်သောရုပ်ရှင်များတွင်အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောကြယ်ကက်သရင်းဟီဂယ်လ်သည်မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည် ခေါက်သည် နှင့် ၂၇ အဝတ်အစား၊ သူမနှင့်အတူသူမ၏အနိုင်ရတဲ့ Streak ဆက်လက် အရုပ်ဆိုးအမှန်တရား အမှန်တကယ်အောင်မြင်သောရင်ခွင်နှင့်ခေတ်၏နောက်ဆုံးအလားအလာရှိသည့် rom-coms များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယခုနှစ်Aprilပြီလ Netflix တွင်အကောင်းဆုံးအသစ်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Katherin Heigl တွင်သရုပ်ဆောင်သည် အရုပ်ဆိုးအမှန်တရား ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်သူ Abby Richter အနေဖြင့်ပြည့်စုံသောမိတ်ဖက်ကိုမဆုပ်မနစ်ရှာဖွေနေသော်လည်းသိသာထင်ရှားသည့်တွေ့ရှိမှုမရှိသေးပေ။ သူမ၏အလုပ်ရှင်များကသူမအား macho နှင့်ထင်မြင်ယူဆထားသောရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာရုပ်မြင်သံကြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး Mike Chadway (Gerard Butler) နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်တွန်းအားပေးသောအခါ၊ Mike သည်သူနှင့်သူမ #၂၂၁၇ တို့အားအမျိုးသမီးများအားမည်သည့်အရာဖြင့်ရိုက်မိသည်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်ကတိပြုသကဲ့သို့သူတို့နှစ် ဦး သည်တစ် ဦး အပေါ်တစ် ဦး ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်သောရုပ်ဆိုးသောအမှန်တရားအကြောင်းသင်ယူကြသည်။
အရုပ်ဆိုးအမှန်တရား wasn & # 8217 ကိုဝေဖန်သူများကကောင်းစွာလက်ခံခဲ့ကြသော်လည်းယခုရုပ်ရှင်သည် Box Office ၏ပြောင်မြောက်သောဇာတ်ကွက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်ကိုနှစ်သက်သည်။ ရုံအတွက်အချိန်အတွက် အရုပ်ဆိုးအမှန်တရား ဒီနွေရာသီရဲ့ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကျင်းပဖို့အတွက်၊ ဒီနွေနွေရာသီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Netback ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်း Netflix ကိုလာပါတယ်။ ဂီတကနေအမျိုးအစားအထိ, ငါတို့သေချာပေါက်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းအားလုံးပြန်ပစ်လိမ့်မယ်။ Don & # 8217 သည် ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းမှromပြီလကုန်ပိုင်းတွင်စတင်ထုတ်လွှင့်သောအလွန်ကောင်းမွန်သော rom-coms များထဲမှတစ်ခုကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်သင်၏အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်သည်။
၅ ။ မီးလောင်ရာ
ဒါရိုက်တာ Lee Chang-dong
မင်းသား Yoo Ah-in၊ Steven Yeun၊ Jeon Jong-seo၊ Kim Soo-Jyung, Choi Seung-ho, Moon Sung-keun, Min Bok-gi, Ban Hye-ra, Lee Bong-ryun
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုရုပ်ရှင်ကိုကြည့်မည့်အစားသန်းနှင့်ရှစ်ကြိမ်အကြိမ်သန်းပေါင်းများစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်၊ အသစ်တစ်ခုကိုကြည့်လျှင် ပို၍ ကောင်းသည်။ ယခုလတွင် Netflix ကကျွန်ုပ်တို့အားလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်၊ ၁၅ နှစ် (သို့) ၂၅ နှစ်မျှချစ်ခဲ့သောရုပ်ရှင်ကားထဲပြန်ဝင်စေချင်သည်မှာထင်ရှားသည်။ သို့သော်ထိုအချိန်တွင်နို့တိုက်ခြင်းအာခေါင်ကိုသန့်ရှင်းစေရန်အသစ်သောပူဇော်သကာများစွာရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် မီးလောင်ရာ ဒီလလာမယ့်ပိုကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါကိုသင့်ရဲ့စောင့်ကြည့်စာရင်းထဲထည့်ဖို့စဉ်းစားသင့်တယ်။
Haruki Murakami & # 8217s ဇာတ်လမ်းတိုနှင့် # 8220Barn Burning from the book ဆင်ပျောက်ကွယ် ရုပ်ရှင် မီးလောင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒရာမာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သည်သင်၏ထိုင်ခုံ၏အစွန်းတွင်ရှိနေစေမည်။ မီးလောင်ရာ အိမ်နီးချင်းဟောင်း Hae-mi (Jeong Jong-seo) ထဲကို ၀ င်သွားပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့ Jong-soo (Yoo Ah-in) နောက်ကိုလိုက်တယ်။ သူမသည်သူမနှင့် # 8217 မြို့ပြင်တွင်ရှိစဉ်သူမ၏ကြောင်ကိုကြည့်ရှုရန်ပြောပြီးသူမခရီးစဉ်မှပြန်လာသောအခါသူနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သူ Ben (Steven Yeun) နှင့်သူနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
မီးလောင်ရာ ပထမ ဦး ဆုံးပြသခြင်းသည်မေလ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မေလကကိန်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ဂုဏ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရပြီး၎င်းသည်ဂုဏ်သတင်းကြီးသော Palmed& # 8217Or ပြိုင်ပွဲတွင် FIPRESCI ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ရုပ်ရှင်သည် ၉၁ ကြိမ်မြောက်အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွင်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားရုပ်ရှင်ပြိုင်ပွဲဝင်အတွက်တောင်ကိုရီးယား & # 8217s ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ မီးလောင်ရာ wasn & # 8217t သည်နောက်ဆုံးတွင်ထိုဆုအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်နောက်ဆုံးကိုးခုပါသောဇာတ်လမ်းတိုထဲမှ slot ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ပထမဆုံးကိုးရီးယားဇာတ်ကားဖြစ်ခြင်း၏ထူးခြားမှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ရှင်းနေသည်မှာ၊ ဤရုပ်ရှင်ကိုဝိုင်း။ မလွှတ်နိုင်သော buzz တစ်ခုရှိသည်။ လရဲ့အဆုံးမှာ Netflix မှာ ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေတာကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။
ဒါရိုက်တာ Brie Larson
သရုပ်ဆောင် - Brie Larson, Samuel L. Jackson, Joan Cusack, Bradley Whitford, Karan Soni, Mamoudou Athie, Mary Holland, Hamish Linklater, Annaleigh Ashford, Martha MacIsaac, Chris Witaske, Ryan Hansen
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - သောကြာနေ့၊ Aprilပြီ ၅
Captain Marvel လုပ်နိုင်တာနဲ့ # 8217t တစ်ခုခုလုပ်နိုင်ပါသလား။ Box Office ကိုချိုးဖောက်ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံး Marvel ရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္inမှာသူမနဲ့သူမအတွက်စူပါဟီးရိုးဆုကိုဆွတ်ခူးခဲ့သည် Avengers: Endgame ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင် Brie Larson သည်သူမ၏အင်္ဂါရပ်ဒါရိုက်တာကို Netflix သို့ခေါ်ဆောင်လာသည်။ အရာအားလုံး & # 8217s Brie တက်လာမယ့်! သူမသည် Marvel နှင့်တောက်ပသောအနာဂတ်ရှိသော်လည်းအော်စကာဆုရှင်သည်သူမ၏ Indie Darling ကိုနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်အတူရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ကြံ့ခိုင်စတိုး ။
Brie Larson သည်ဒါရိုက်တာအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ရန်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ကြံ့ခိုင်စတိုး, သူမ Kit အမည်ရှိရုန်းကန်အနုပညာရှင်ကစားအဖြစ်။ သူမနှင့် # 8217s သည်သူမ၏မိဘများနှင့် # 8217 သို့အိမ်သို့ ပြန်၍ ရုံးခန်းဖွင့်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသည့်အခါ Kit သည်အမည်မသိအရောင်းစာရေး (Samuel L. Jackson) မှသူမအားစတိုးဆိုင်သို့ #၂၂၂၂ သို့ဖိတ်ကြားသည့်အချိန်တွင် Kit သည်ထူးထူးဆန်းဆန်းစာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နေရာသည်သင်လိုအပ်သည့်အရာကိုရောင်းချရန်နှင့် # 8221 ကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးအရောင်းသမားက Kit သည်သူမအားအကောင်းဆုံးကလေးဘဝဆန္ဒကို - ကြံ့အဖြစ်ပေးလိမ့်မည်ဟုကတိပြုသည်။
ကြံ့ခိုင်စတိုး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင်တိုရွန်တိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ပထမဆုံးအကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ Netflix တွင်ပွဲ ဦး ထွက်ပြသသောအခါနောက်ထပ်ဝေဖန်သူများကရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုရန်အခွင့်အလမ်းရရှိကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်အထိရုပ်ရှင်သည်ပုပ်သောခရမ်းချဉ်သီးများအပေါ် ၆၈% အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။ Larson ဟာဇာတ်လမ်းတိုအနည်းငယ်ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့် ကြံ့ခိုင်စတိုး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန်သူမ၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ Larson ဟာစိတ်ရင်းမှန်၊ ရယ်စရာကောင်းပြီးထူးခြားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုဆက်ပြီးဖန်တီးနိုင်ဖို့ငါတို့ကံကောင်းသင့်တယ်။ သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်များကိုထိုမတိုင်မီမှတ်သားပါ Endgame Aprilပြီလ ၅ ရက်နေ့မှာရယ်မောပါ။
နယူးယောက်နှင့် ၈၂၁၁ :ဂုတ် ၄ - (US TABS OUT) (LR) သရုပ်ဆောင်များသည် Blake Lively၊ Alexis Bledel၊ America Ferrera နှင့် Amber Tamblyn တို့သည် MTV & # 8217s MTV Times Square စတူဒီယိုတွင်တိုက်ရိုက်တောင်းခံမှုပြုလုပ်စဉ်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ နယူးယောက်စီးတီး၌တည်၏။ (Scott Gries / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
၃ ။ ခရီးသွားဘောင်းဘီများ၏အစ်မ (၁ & ၂)
ဖြန့်ချိနှစ် - 2005, 2008
netflix အပေါ်မနက်ဖြန်ရာသီ2ဒဏ္endsာရီ
ကညွှန်ကြားရေးမှူး - ကင် Kwapis၊ Art Hamri
သရုပ်ဆောင်: Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera, Blake Lively
ယခုAprilပြီလ Netflix တွင်လွမ်းဆွတ်မှုလွန်ကဲခြင်းအတွက်သင်ပြင်ဆင်ထားပါသလား။ နှစ်ခုလုံးအတွက်ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဘောင်းဘီများ၏ညီအစ်မ စီးရီးများသည်လ၏ပထမလတွင်ထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်Fပြီလမိုက်မဲမှု & # 8217s နေ့ဟာသ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အလယ်တန်းကျောင်းရှိစာအုပ်စီးရီးများကိုစွဲလမ်းစွာဖတ်နေသည့်အချိန်များ၊ ညများ၊ နေ့လည်ခင်းများနှင့်ကုန်လွန်သွားသောနေရာတိုင်းတွင်ရှိသည့်ပရိသတ်များသည်ရုပ်ရှင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုနှင့်နောက်ဆက်တွဲကိုပြန်ကြည့်ရန်အခွင့်အလမ်းရကြလိမ့်မည်။ ဤရုပ်ရှင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ifs, ands, buts (ဘောင်းဘီရှိသူများ မှလွဲ၍) မှလွဲ၍ ဤလသည်အကောင်းဆုံးလများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူဝတ္ထုငယ်လေးကို Ann Brashares မှအခြေခံပြီး၊ ခရီးသွားဘောင်းဘီများ၏ညီအစ်မ အမျိုးသမီးငယ်များနှင့် # 8212 Lena Kaligaris (Alexis Bledel)၊ Tibby Rollins (Amber Tamblyn)၊ Carmen Lowell (America Ferrera) နှင့် Bridget Vreeland (Blake Lively) & # 8212 စသောအမျိုးသမီးငယ်လေးပုံတပုံကိုဗဟိုပြုသည်။ သူတို့အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသောဂျင်းဘောင်းဘီ။ နွေရာသီလများ (နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ဘဝ) ကသူတို့ကိုကွဲပြားသောလမ်းကြောင်းများသို့ပို့သောအခါ၎င်းတို့သည်သူတို့၏မပြိုကွဲသေးသောအစ်မများနှင့်ဆက်နွှယ်ရန်အချင်းချင်းအကြားနှင့်အပြန်အလှန်ဘောင်းဘီကိုပို့သည်။
ခရီးသွားဘောင်းဘီများ၏ညီအစ်မ Rotten Tomatoes တွင် ၇၇% ကိုင်ထားသည်ဆိုသောဝေဖန်သူများကချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသည်။ နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်အကောင်းဘက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် box office တွင်နွေးထွေးသောပြန်လည်ရရှိမှုများကိုမျှဝေထားသည်။ မည်သည့် reception ည့်ခံသည်ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ ဤရုပ်ရှင်သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလေးသရုပ်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များအထိကျယ်ပြန့်သည့်အမျိုးသမီးချစ်ကြည်ရေး၏အကောင်းဆုံးခေတ်သစ်ပုံဖော်ချက်များဖြစ်သည်။
အမည်ရတစ် ဦး ကလှည့်ဖျား - ချွတ်ဝတ္ထု ညီအစ်မထာဝရ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုအတွက်အခွင့်အလမ်းကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ဂီယာတွေဟာဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့လျားနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အခုငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအတွက်လမ်းလျှောက်နိုင်တယ် ညီမလေး သူတို့တစ်လရဲ့ထိပ်မှာရောက်တဲ့အခါရုပ်ရှင်တွေ!
ဒါရိုက်တာ Chris Nelson
သရုပ်ဆောင်: လော်ရာ Marano, နော Centineo, Camila Mendes, Matt Walsh, Odiseas Gerorgiadis, ဝိန်း P & eacuter & eacute
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - သောကြာနေ့၊ ၁၂
အကယ်၍ သင်သည် Netflix junkie သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းကမ္ဘာတွင်မကြာခဏနေထိုင်သူမဟုတ်ပါကနောက်လာမည့်ဟောလိဝုဒ်လူငယ်လေး၏နှလုံးခုန်သံထွက်လာသည်ကိုသင်လက်လွတ်သွားနိုင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမူလဆယ်ကျော်သက်အချစ်ဟာသရုပ်ရှင် ယောက်ျားလေးများအားလုံးအတွက်ငါ & # 8217ve မတိုင်မီကချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည် ပကတိပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအစဉ်အလာအဖြစ်အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး၎င်း၏ ဦး ဆောင်စုံတွဲကိုအထူးသဖြင့် Noah Centineo ၏ကြယ်များဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်ညလုံးသူသည်အင်တာနက် & # 8217 ၏ရည်းစားဖြစ်လာပြီးနောက်ထပ်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏တတိယမြောက် Netflix rom-com တွင်သူနှင့်သူမအပေါ်နောက်ထပ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားစေခဲ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံသောနေ့စွဲ ။
နော Cent Centineo တွင်သရုပ်ဆောင်သည် ပြီးပြည့်စုံသောနေ့စွဲ Brooks Rattigan သည်အထက်တန်းကျောင်းအကြီးတန်းအကြီးအကဲအနေဖြင့်သူ၏အိပ်မက်အားအိုင်ဗီလိဂ်ကျောင်းသို့တက်ရန်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော်လည်းသူသည်ကျန်ရှိသောလိုအပ်သောအထုပ်များ၊ # 8212 သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ၊ ငွေများနှင့်စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဝန်ခံချက်ဘုတ်အဖွဲ့။ Brooks သည် Celia Lieberman (Laura Marano) ၏ရည်းစားအဖြစ်ရပ်တည်သောအခါသူသည်ပြီးပြည့်စုံသော plus-one အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုရောင်းရန် app တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ သို့သော်သူသည် Shelby (Camila Mendes) နှင့်တွေ့ဆုံသောအခါသူ၏စီးပွားရေးတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်သူသည်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသောအရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောနေ့စွဲ Noah Centineo သည်သူ၏မျိုးဆက်ဖြစ်သော Freddie Prinze ဂျူနီယာအဖြစ်ပိုကောင်းအောင်ခိုင်မာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏ပိုစတာသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိဆယ်ကျော်သက်များ၏နံရံများပေါ်တွင်ကပ်ထားသည့်ပိုစတာနှင့် # 8217s ဖြစ်သည်။ သူသည် Netflix & # 8217s ရှိနောက်ထပ်ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်သည် ယောက်ျားလေးများအားလုံးအတွက်ငါ & # 8217ve မတိုင်မီကချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည် Sony အတွက် He-Man အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရန်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နေသည်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ Disney Channel alum Laura Marano နဲ့သူနဲ့သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် မြစ်ကြီးနား standout Camila Mendes ။ Don & # 8217 မeveryoneပြီ ၁၂ ရက်ကလူအများက ၄ င်း၏လေးကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောသောအခါလူတိုင်းပြောမည့်အကြောင်းအရာပျောက်ဆုံးခြင်းကိုပင်စဉ်းစားပါ။
၁ ။ တစ်ယောက်ယောက်က
သရုပ်ဆောင်: Gina Rodriguez, Brittany Snow, DeWanda ပညာရှိ, Lakeith Stanfield, Rosario Dawson, ဘင် Sidell, Peter Vack
ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ - သောကြာနေ့၊ Aprilပြီ ၁၉
အပျိုစင်ဂျိန်း နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုလေလံဆွဲလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း 2019 သည် Gina Rodriguez ၏နှစ်ဖြစ်သည်။ သူမသည် & # 8217s ပြီးသားအတွက်မျက်နှာပြင်ကြီးပေါ်မှာ splash ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ Miss Bala နှင့်အလားအလာအပေါ်ထုတ်လုပ်သူအခန်းကဏ္plကိုကြံစည် အပျိုစင်ဂျိန်း spin-off, ဒါပေမယ့်သူမ & # 8217ll လာမယ့်ကြီးမားတဲ့ရင်ခုန်စရာဟာသအာရုံ၏ Netflix နှင့် # 8217s အတွက်သူမ၏ရုပ်ရှင်ကြယ် chops ပြသ တစ်ယောက်ယောက်က ။ သင်အထက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်နောက်တွဲယာဉ်အပြီးတွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ဗိုင်းရပ်စ်အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးနောက်Aprilပြီလကအကောင်းဆုံးဖြန့်ချိမှုအသစ်ရုပ်ရှင်နှင့် # 8217s သည်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
Gina Rodriguez သည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိမဂ္ဂဇင်းတစ်ခု၌သူ၏အိပ်မက်အလုပ်ကိုစတင်ခဲ့သူဂီတပညာရှင်ဂျဲနီအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူမသည်နယူးယောက်စီးတီးတွင်သူမနှင့်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် Blair (Brittany Snow) နှင့် Erin (DeWanda Wise) နှင့်နစ်ခ် (Lakeith Stanfield) ၏ရည်းစားများအပါအ ၀ င်ဆန့်ကျင်ဘက်ကမ်းခြေသို့ပြောင်းရွှေ့ချိန်တွင်အနည်းငယ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဂျဲနီနှင့်နစ်ခ်တို့ကလမ်းခွဲရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၊ တိုနီဘလဲနှင့်အဲရင်တို့ကနယူးယောက်စီးတီးမှတဆင့်နောက်ဆုံး (မှားယွင်းသော) စွန့်စားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သူမကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။
တစ်ယောက်ယောက်က စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဂျနီဖာကရင်ရော်ဘင်ဆင်က MTV & # 8217s သက်တမ်းတိုအစွန်းရောက်အကြိုက်ဆုံးစီးရီးကိုဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ ချိုမြိန်၊ နှင့်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ဟာသပါရမီရှင်ပေါလု Feig ရေတွက်။ Rodriguez သည် Netflix အတွက်နောက်ထပ်ကြီးမားသောထိခိုက်မှုဖြစ်လာနိုင်သည့်နေရာတွင်သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့်နေရာတွင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်နှစ်ဆတာဝန်ယူသည်။ ကြိုက်နှစ်သက်သောရုပ်ရှင် တစ်ယောက်ယောက်က ယခုအချိန်တွင် box office တွင်အနည်းငယ်သာရှိသေးသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည် streaming ပြန်လာကြပြီ။ ဒွန် & # 8217t Aprilပြီလ 19 ရက်နေ့တွင်ကြီးမားသော Premiere လက်လွတ်!
ယခုလ Netflix တွင်မည်သည့်ထုတ်လွှတ်မှုအသစ်များကိုသင်ကြည့်မည်နည်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ!
နောက်တစ်ခု:၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင် Netflix သို့လာရောက်ပြသမည့် 10 ပွဲများ။ 'နောက်တစ်ခု 26 ၏ 12 Prev browse လုပ်ရန်သင်၏←→ (မြား) ကိုသုံးပါ
netflix ဒီကျွန်တော်တို့ကိုရာသီ2ဖြစ်ပါတယ်
Rick နှင့် morty ရာသီ4ဇာတ်လမ်းတွဲ stream 4
အံ့ဖွယ်ခြေးပိုးထိုးဇာတ်လမ်းတွဲ 14 လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
မနက်ဖြန်ပြန်လာသည့်ရက်စွဲ၏ DC ဒဏ္ဍာရီ
netflix တွင် Bob burger ရာသီမည်မျှရှိသနည်း